Burmese taste - Iora: ထမင်းလွတ် ကြာဆံကြော်
ကြာဆံကြော်ရတာကြော်လေ့ကြော်ထရှိရင်ဘာမှမခက်ပါဘူး။ သူ့ ကိုကြော်ရင်ကြာဆံမျှင်တွေပြတ်ပြီးမသွားအောင်သတိလေးထားလိုက်ရင် လှလှပပလေးရပါတယ်။ ပြတ်နေရင်တော့သိပ်မလှတော့သူများကိုကြွေးရင်မျက်နှာပန်းသိပ်မလှဘူးပေါ့။ ကျန်တာကတော့ဘာမှပညာမပါပါဘူး။ ကျမတုို့ အမေကကြာဆံကြော်နေရင်ပျော့ပြီးပြတ်ကုန်ရင်သဘောမကျပါဘူး။ အမြဲသတိပေးပါတယ် မပြတ်စေဘို့ ။ အမေကသိပ်အသေးစိပ်တာဘဲ။ ဂျီးများတာဘဲလို့ ငယ်ငယ်တုန်းကတွေးခဲ့သလောက် ကျမလည်းအမေ့ခြေရာတစ်ထပ်တည်းနင်းမှန်းမသိနင်းနေမိလျက်သားဖြစ်နေတာ မကြာခဏသတိပြုမိလာပါတယ်။ ကြက်တံဆိပ်ငရုတ်ဆီနဲ့ သခွားသီး၊ ကြက်သွန်ချဉ် ပထမဆုံးဆီနဲနဲနဲ့ ကြက်ဥတွေမွှေကြော်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ပန်းကန်တစ်ချပ်ထဲဆည်ထဲ့ထားပါတယ်။
အသီးအနှံတွေကုိုယ်နှစ်သက်သလောက်အနေရခါနီးရင် ရေစစ်ထားတဲ့ကြာဆံထဲ့။ ခရုဆီထဲ့မွှေ။ ခဏဘဲ။ သာသာလေးမွှေပြီး အားလုံးလည်းသမ၊ ကြာဆံလည်း ကျက်။ အစောကဖယ်ထားတဲ့ ကြက်ဥကြော်တုို့ ဝက်အူချောင်းတုို့ ထဲ့။ တရုတ်နံနံ နဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်ဖြတ်ထဲ့။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် လေးဖြူးလိုက်ရင် သုံးဆောင်လို့ ရပြီပေါ့။ ၀က်အူချောင်းကမဖယ်လည်းရပါတယ်။ ကျမကသူ့ အနံ့ ကိုမလိုချင်လို့ ဖယ်ထားတာပါ။ တကယ်လို့ ကြာဆံကစိမ်ထားတာလိုရင် ရေလေး ဖြန်း ဒါမှမဟုတ် အရုိုးပြုတ်ရည်တည်ထားတာရှိရင်အရုိုးပြုတ်ရည်လေးနဲ့ နဲနဲဖြန်းကြော်လည်းကောင်းတယ်။ ဟင်းချိုလေးလည်းလုပ်လုို့ ရတာပေါ့။ မတည်ထားလည်းရပါတယ်။ ခရုဆီနဲ့ သကြားလေးနဲ့ ဆုိုအုိုခေပါတယ်။ ကျမတော့တည်ထားတဲ့အရုိုးပြုတ်ရည်ထဲကို အရသာပြင်ပြီး သောက်ခါနီးကျကြက်သွန်မြိတ်နဲ့ငရုတ်ကောင်းလေးခပ်လိုက်တာပေါ့။
ကျမတော့ဟင်းချိုပန်းကန်မရုိုက်ထားလိုက်တော့ဘူး။ ရုိုက်ရင်စားတဲ့အခါကျအေးနေပြန်ရော။ ခုနောက်ပိုင်းဓါတ်ပုံရုိုက်ရတာပျင်းပျင်းနေလို့ သူကတောင်မစားခင်ဓါတ်ပုံမရုိုက်တော့ဘူးလားတဲ့။ တစ်ချို့ ကတော့ ပဲငံပြာရည်အကြည်တုို့ အနောက်တို့ ထဲ့ကြော်လေ့ရှိတယ်။ ကျမကတော့မထဲ့ဘူး။ ခပ်ဖြူဖြူလေးကိုပိုသဘောကျလို့ ပါ။ ပဲငံပြာရည်နံ့ ထွက်နေတာလည်းမကြိုက်လို့ ပါ။ ကြိုက်တတ်ရင်တော့ထဲ့လို့ ရပါတယ်။ သုံးဆောင်နုိုင်ပါပြီ
ဘေဘီMay 3, 2012 at 2:49 AMနေကောင်းတယ်ဟုတ်း)ကောမန့် မချန်ပေမဲ့ အမြဲလာလည်တဲ့ထဲမှာကိုယ်လည်းပါတယ်း)ReplyDeleteRepliesIoraMay 3, 2012 at 3:56 PMကောင်းပါတယ်ဘေဘီရေ။ ဘေဘီရောကောင်းတယ်မဟုတ်လား။အမြဲလာလည်လို့ ကျေးဇူးတင်ရပိုခင်မင်ရပါတယ်နော်။ ပြောရမယ်ဆုိုရင်ဘေဘီကကိုယ့်ကိုအဦးဆုံး ကွန်မန့် ထားခဲ့လို့ ကုိုယ်ကအမြဲ မှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေတာပါ။ဘေဘီ့စီမှာချန်လို့ မရလို့ ကိုယ့်စီမှာချန်မှဘေဘီ့အသံလေးကြားရတာလေ။ ဘေဘီပျောက်နေတုန်းကကိုယ်ဘုရားမှာတောင်ဆုတောင်းပေးသေးတယ် နေမကောင်းများဖြစ်နေသလားလို့ ။DeleteReplymstintMay 3, 2012 at 3:05 AMဒီလို အရသာရှိရှိ ကြာဆံကြော်လေး စားလိုက်ရလို့ကတော့ ထမင်းကို နှစ်နပ်လွတ်ချင်လွတ်ပါစေ အိုင်အိုရာရေး) အားပေးသွားတယ်နော်။စိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြပါစေကွယ်။မေတ္တာဖြင့်အန်တီတင့်ReplyDeleteRepliesIoraMay 3, 2012 at 3:59 PMတီတင့်..အားပေးနော်။အုိုင်အုိုရာလည်း အဲဒီနေ့ က နှစ်ခါပြန်အားပေးလိုက်တယ်လေ။း)DeleteReplyyellowtreeMay 3, 2012 at 4:20 AMတကယ်စားချင်စရာ.. ဒီနေ့ညစာတော့ ကြာဇံကြော်ဘဲ စားတော့မယ်..ReplyDeleteRepliesIoraMay 3, 2012 at 4:39 PMYellowtree..ကြော်စားလိုက်။ စားကောင်းပါတယ် အသီးအရွက်များများနဲ့ ဆိုလေ။လာလည်လို့ ကျေးဇူးပါ။ အဲဒီကိုလည်းစာတွေလာဖတ်သွားသေးတယ်။ ကြိုက်တယ်။DeleteReplyAunty OoMay 3, 2012 at 6:24 AMကြာဇံကြော်တွေအဝစားသွားပြီ။သိတ်ကောင်းတာဘဲ။ReplyDeleteRepliesIoraMay 3, 2012 at 4:40 PMအန်တီဦး..အ၀စား။ ဒီမှာစားရင်ဘယ်တော့မှကုန်တယ်မရှိဘူး။း))DeleteReplyCandyMay 3, 2012 at 8:06 AMဟင်းတမယ် အိုင်ဒီယာရသွားပြီနောက်နေ့ ကြာဇံကြော်ရမယ် ဟဲဟဲ :D :DReplyDeleteRepliesIoraMay 3, 2012 at 4:41 PMကန်ဒီ..အသီးအရွက်တွေများများနဲ့ ကြော်စားသိလား။ တစ်ခွက်တည်းနဲ့ ပြီးရော။း)DeleteReplySnow MayMay 3, 2012 at 11:10 AMကြာဇံကြော်ကို အဖြူရောင်ကြိုက်တာချင်းတော့ တူသွားပြီမမရေ :)ReplyDeleteRepliesIoraMay 3, 2012 at 4:42 PMစနုိုးမေ..အို..ဒီလိုတူတဲ့သူလည်းရှိသေးတယ်နော်။း)DeleteReplyမီးမီးငယ်May 3, 2012 at 12:02 PMရခိုင်မုန့် တီစားမလို့ ၊မုန့် ဟင်းခါးဖတ်ခြောက်ဆိုပြီး ကြာဇံထုတ်ကြီးဆွဲလာမိတယ်။ကြော်စားရအုံးမယ်။ဒီလိုလေးပေါ့...။ReplyDeleteRepliesIoraMay 3, 2012 at 4:44 PMမီးမီးငယ်..ကြော်စားဖြစ်အောင်ကြော်စားနော်။ အသီးအရွက်များများနဲ့ ဆိုတော့ကြိုက်မှာသေချာတယ်။ ကုိုယ်ကြော်တာဆီလည်းသိပ်မထဲ့ထားဘူးလေ။DeleteReplyNyi Linn ThitMay 3, 2012 at 2:51 PMအသီးအရွက်တွေ အများကြီးနဲ့ အဲဒီလို ကြာဇံကြော်မျိုးကို ကြိုက်တယ် မအိုင်အိုရာရေ..၊ ကြာဇံကို အရူးအမူး ကြိုက်လှတယ် မဟုတ်ပေမယ့် အခုလို အသီးအရွက်တွေ တလှေကြီးနဲ့မို့ သွားရည်ကျ သွားတယ်၊း) ဘယ်လို ကြော်ရမလဲဆိုတာ အသေးစိတ် ရှင်းပြထားလို့လည်း ကျေးဇူးပါဗျာ၊ ဇနီးသည်က ဘေးကနေ လာကြည့်ပြီး စားချင်လို့-တဲ့၊ ဒီဓါတ်ပုံတွေကနေ inspiration ရပြီး မကြော်ချင်ဘူးလား လုပ်နေတယ်ဗျို့..။း)ReplyDeleteRepliesIoraMay 3, 2012 at 4:51 PMကိုညီလင်းသစ်..တူပြန်ပြီနော်။ ကျမလည်း အသီးအရွက်များမှကြိုက်တယ်လေ။ကဲ..မအိမ်သူကိုကြော်ဖြစ်အောင်ကြော်ကြွေးလိုက်နော်။ ကြော်ဖြစ်လောက်အောင် Inspiration မရဘူးဆုိုရင်တော့ မအိမ်သူကိုကိုယ်တုိုင်လာကြော်ကြွေးမယ်လေ။ လေယာဉ်လက်မှတ်လေးဘဲပို့ ပါ...း)(တန်လိုက်တာ)မအိမ်သူကိုတစ်ခါကြော်ကြွေးလိုက်လို့ ကြိုက်သွားရင် နောက်ဆုိုမအိမ်သူကကြော်ကြွေးနုိုင်တယ်လေ။ တစ်ခါတော့ရင်းသင့်တာပေါ့...အဟက်..နှစ်ယောက်လုံးကိုခင်နေလို့ စလိုက်တာပါ။DeleteReplyဘရဏီMay 4, 2012 at 4:07 AMကြာဆံကြော်ကြည့် ပြီးဗိုက်စာသွားပြီ။ ထမင်းသွားစားတော့မယ်။ReplyDeleteစံပယ်ချိုMay 4, 2012 at 5:11 AMကြာဇံကြော်ကြိုက်မှကြိုက်ဝက်သားမစားလို့အကုန်မသွားချင်တာReplyDeleteIoraMay 4, 2012 at 11:46 PMဘရဏီ..အာလူးသုတ်လာကြည့်တုန်းကလည်းဗိုက်ဆာပြီးပြန်လာရတယ်။း))ဂျက်..အဲဒါကြက်သားနဲ့ ကြော်ထားတာပါ။ ကြက်သားတုံးက၀က်သားနဲ့ တူနေလို့ ပါ။၀က်အူချောင်းကြော်တဲ့အိုးကလည်းသပ်သပ်ပါ။ သပ်သပ်မကြော်ရင်လည်းဝက်အူချောင်းဆီတွေသွန်ပစ်ပြီးဆေးပစ်ပြီးမှဆီအသစ်နဲ့ ကြော်လေ့ရှိပါတယ်။အကုန်မသွားလို့ ရတယ်လို့ .......း))အိုင်အိုရာReplyDeleteQtMay 5, 2012 at 4:17 PMအသီးအရွက် များများထည့်ပေးပါဗျို့ ....ကြက်သားမပါရင် နေပါစေ အသီးရွက်များများ :DReplyDeletesan htunMay 5, 2012 at 4:26 PMနက်ဖြန် ကြာဇံကြော်စားဦးမှ..ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး သားရေယိုသွားတယ်...ReplyDeleteAnonymousMay 7, 2012 at 10:04 AMကျူတီ..ကဲ..အများကြီးထပ်ထဲ့လိုက်တယ်။။အ၀စားပေတော့။း)စန်းထွန်း..လွယ်တယ်စန်းထွန်းရေ။ ကြော်စား။ ကြော်စား။ တစ်ခွက်ထဲနဲ့ အဟာရ အစုံဘဲ။း)အိုင်အိုရာReplyDeleteChaw SuMay 7, 2012 at 11:50 PMအရမ်းကောင်းလွန်းလို. အဝစားသွားပါတယ်...း)ReplyDeleteစံပယ်ချိုMay 8, 2012 at 1:29 AMကြော်စားဖို့အစုံတော့ဝယ်ပြီးပြီနက်ဖြန်ကြော်စားတော့မယ်....ဟီး သတင်းလာပို့တာReplyDeleteAnonymousMay 8, 2012 at 3:20 PMချောစုလက်ရာတော့မမှီဘူးနော်။ ကိုယ်အဲဒီကိုလာလည်ရင်တအားဗုိုက်ဆာပြီးပြန်လာရတာဘဲ။း)ဂျက်...အိုး...ဂွတ်..ဂွတ်..ဒီတစ်ခါတော့တကယ်ကိုပီပီပြင်ပြင်လှုပ်ရှားနေပြီပေါ့။ကြော်ပြီးရင်တင်လိုက်နော်။ တစ်ခေါက်ပြန်လာသွားရည်ကျရအောင်လို့ ။း))အိုင်အိုရာReplyDeleteAdd commentLoad more...
တန်ခူးလရဲ့ မုန့် အလှူ အုန်းနုို့ ကျောက်ကျောနဲ့ ထမင်းခြောက်ကြော် (ရယ်ဒီမိတ်)
Microsoft Visual 2003 Keygen
The Dream Hotel(Myanmar)German TV Series
Burmese breakfast and others
Since 25 January 2012
I think they are hungry!!! You can feed them if you want.
Copy right Iora. Awesome Inc. template. Template images by borchee. Powered by Blogger.